Yakatumirwa ne Tranquillus | Feb 14, 2022 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: chechikwata chako
PAKAVHA : Mubairo mu2022 mangwanani timu
Mai X, Mr Y,
Takangove nekugadzirisa kwangu kwepagore pa xxxxxx. Mukati mokutsinhana kwedu, takakurukura wedzero inobvira kuvabatani vangu uye neni pachangu.
Ini ndaida kusimbisa chikumbiro changu nekukupa chaiyo mienzaniso yemabasa andakwanisa kuita nechikwata changu.
Mirayiridzo yangu inogara yakajeka uye yakarongeka.
Zvinangwa zvinowanzoita nhevedzano yemabasa akanyatsotsanangurwa anogoneka kuitwa nenhengo dzeboka.
Ndinonyatsoziva kuziva mapoinzi akasimba echimwe nechimwe uye nekuaisa kumberi kwekubudirira kwemisheni yedu.
Pakupedzisira, mudhipatimendi rangu, mamiriro ekunze akanaka kwazvo. Kune hukuru hwekubatana kweboka uye simba rinobatsira munhu wese
munhu ari wose anotarisana nemitoro yake, anoita basa rake nounyanzvi, uye nokudisa anopa betsero apo inodikanwa.
Ndinoda chaizvo kuti utarise zvese izvi zvinhu zvinoita kwandiri senge zvakakosha pakubudirira kwekambani, uye kuti iwe unopa muhoro wekuwedzera wegore ra2022 kune vese vashandi vangu. Kungava kuzivikanwa kwechokwadi kwavari uye pamusoro pezvose, kuwedzera kuduku uku kuchavapa kukurudzira kukuru kutanga gore idzva.
Ini ndinoramba ndiri paruoko rwako rwese kana iwe uchida kutaura nezvazvo zvakare.
Ndapota gamuchirai, Mai X, Mr. Y, kwaziso dzangu dzechokwadi.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: Bank Inishuwarenzi chikamu
PAKAVHA : Mubairo wangu muna 2022
Kubva xxxxxx, ndanga ndashandirwa nebhanga sechipangamazano.
Kana ndikazvibvumira kukunyorerai nhasi ndezvekutaura chinhu chiri padyo nemoyo wangu: mubairo wangu wegore ra2022.
Nditenderei kutanga ndisimbirire pachokwadi chekuti pakupera kwaMbudzi ndakazadzisa zvinangwa zvamakanga mandipa, zvinoti:
Huwandu hwekuvhurwa kweakaundi hwakawedzera kubva kuxx muna 2020 kuenda kuxx muna 2021
Kunyoresa kumasevhisi anopihwa nebhangi kune xx vatengi, kureva huwandu hwese: xxxx euros.
Life Insurance yakawedzerawo zvakanyanya.
Ndakapindawo kudzidziswa kwese kuti ndizive chimwe nechimwe chezvigadzirwa zvemari zvinokurudzirwa neBank.
Pakupedzisira, ndiri kufambira mberi zvakajeka kune inishuwarenzi. Sezvamakandiratidza panguva yekubvunzurudzwa kwedu gore rapfuura, iyi yaive pfungwa isina simba kwandiri. Iwe wakabvumawo kuti ndinotevera kudzidziswa kutsva, kwakandibatsira zvakanyanya kuita mharidzo dzangu kune vatengi.
Ichi ndicho chikonzero ndichizvibvumira kukumbira kubvunzurudzwa newe kuti tikurukure nezvemuhoro wangu wegore ra2022.
Ehe, ini ndinoramba ndinewe yese kana iwe uchida chero rumwe ruzivo.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: mubatsiri mukuru
Mushandi wechimiro chedu chidiki kubva XXXXXX, ini parizvino ndine chinzvimbo chemubatsiri mukuru.
Ndinokutendai neruvimbo rwamunoisa mandiri.
Hunyanzvi hwangu, kupindura kwangu uye mari yangu zvakagara zvichizivikanwa. Muna 2021, ndakaita shanduko dzakati wandei dzisina kungodzikisa imwe mari yekushandisa, asi zvakare yakavandudza hupenyu hwemukati hwekambani.
Ndinogona kukupa mienzaniso mishoma inokosha:
Ndakanyorerana chibvumirano chandakanga ndisati ndamboita nekambani yokuchenesa. Huwandu hwebhenefiti hwakaderedzwa ne xx%. Kunyange zvazvo kunaka kwebasa raunzwa nemukurukuri mutsva kwakavandudzwa. Nzvimbo yacho inonakidza zvakanyanya!
Ndakashandawo pamitengo yezvinhu zvemuhofisi uye ikoko zvakare, ndakakwanisa kuhwina mamiriro ari nani.
Tose takagadzira chinyorwa chemukati umo ndakanyora zvinyorwa zvishoma.
Chekupedzisira, ndinogara ndiripo kuti ndipindure zvese zvikumbiro zvako uye ndinokasira kuita nekukurumidza sezvaunoda.
Ndosaka ndichizvibvumira kuti ndikukumbire kuti uwane wedzero yemuhoro wegore ra2022, zvingave kurudziro chaiyo kwandiri.
Naizvozvo ndinovimba kuti tichazotaura nezvenyaya iyi pamwe chete munguva yemberi yauchabvuma kundipa.
Ndapota, gamuchirai, Madam Director, Mr Director, kwaziso yangu yechokwadi.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: mumiriri wekufamba
Mushandi wekambani kubva XXXXXX, ini parizvino ndine chinzvimbo chemumiriri wekufamba.
Ndinonyatsoziva kuti dambudziko ratiri kutarisana naro tese parizvino rakakukanganisa uye kuti wakasangana nematambudziko asingaverengeki. Nekudaro, kuchengetedza kwakawedzera zvakare (kunyanya kumatunhu akasiyana eFrance) uye zvikumbiro zvekubhadhara mota zviri kuwedzera zvakare.
Ichi ndicho chikonzero ndichizvibvumira kukumbira nguva yekusangana newe kuti tikurukure pamwe chete mubairo wangu muna 2022.
Ndaidawo kutaura kuti vamwe vandinoshanda navo vaviri vakasiya kambani uye ini ndini ndiri kutungamira mafaera avo. Ini ndinotevera nexxx vatengi nepo kare nhamba yavo yaingova xxx. Pakupedzisira, ndakachengeta xxx muna 2021, inomiririra kukura kwe% zvichienzaniswa ne2019, gore iro denda reCovid rakanga risati raitika.
Ini ndinoda chaizvo kuratidza kukoshesa kwangu uye inivhesiti yangu mukambani. Kukwidziridzwa kwaizove kucherechedzwa kwebasa rangu.
Ini ndinoramba, hongu, paunayo wako kana iwe uchida chero rumwe ruzivo.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: charterer
Mushandi wekambani kubva XXXXXX, ini parizvino ndine chinzvimbo chechata.
Nyanzvi yechokwadi musangano rekutakura, basa rangu rakagovaniswa sezvizvi:
Hukama nevatengi vane zvinhu zvekutakura
Tsvaga mutakuri achapa sevhisi iyi
Ita shuwa kuti zvinodiwa nevatengi zvinotaurirwa zvakanaka kumutyairi
Tarisa kuti zvinhu zvaendeswa here
Mune basa iri, rinoitwa chete parunhare, ndine hukama hwakanaka nevatengi. Zvinofanira kutaurwa kuti ndakavaka network chaiyo yevatakuri vanoisa chivimbo chavo mandiri uye vane hunhu hwesevhisi hwakafanana neni. Naizvozvo ndinopindura zvakanyanya uye vanhu vese vandinoshanda navo vanogutsikana zvizere. Ndakava mubatsiri wavo welogistics uye ndisisaite zvekutengesa.
Ndosaka zvaiita sezviri pamutemo kwandiri panguva yekubvunzurudza kwedu kwekupedzisira kukukumbirai kuwedzera muhoro wangu wegore ra2022. Ini ndinotora rusununguko rwekunyora zvese izvi mukunyora, kuti mugone kuongorora kusimba kwangu uye chishuwo changu ita zvakawanda nguva dzose, ita zviri nani nguva dzose.
Ndichimirira sarudzo yako, ini ndinoramba ndiri pazvauinazvo zvese.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: kugamuchira
Takabvumirana kundigadzirisa zvepagore paXXXXXX. Munguva iyi yebvunzurudzo, ndinoda kuti titaure pamusoro pemuripo wangu wegore ra 2022. Zvinoratidzika kwandiri kuti ndaratidza kubatanidzwa kwangu mukati mekambani, kunyanya nemienzaniso iyi mishoma:
Kutambira kwekambani iyi kunogara kuchichengetedzwa zvisina tsarukano kuitira kuti veruzhinji vanzwe vakasununguka
Tsamba nemapasuru zvinogara zvichitumirwa nenguva.
Ndakagadzira nzira yekutaurirana, kuburikidza neSkype, kuzivisa waunoshanda naye nezvekusvika kwepakeji
Naizvozvo ini ndinozvibvumira kukumbira kuwedzerwa muhoro wegore ra2022, zvingave kurudziro chaiyo uye kumwe kuzivikanwa kwandiri. Ini ndakatogadzirira, hongu, kutora mamwe mamisheni uye mamwe mabasa anogona kuvandudza kushanda kwekambani senge: maneja ezvikepe zvemotokari (inishuwarenzi, kuongororwa, kuongororwa kwemagetsi emitero), rendi. Ehe, ini ndinogona kukuendesa akasiyana mazano kwauri.
Naizvozvo ndinovimba kuti tichataura pamusoro peiyi nhau pamwe chete mukati mokugadzwa kwomunguva yemberi kwamuchandipa nomutsa.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: mutengi
Kubva XXXXXX, ndinoshandisa basa remutengi mukati meKambani XXXXXX.
Neruzivo rwangu rwechinzvimbo uye ruzivo rwangu, ndinonzwa ndakagadzirira nhasi kutora mabasa matsva.
Nditenderei kutanga pane zvese kuti ndipfupise pano nemazwi mashoma, mamishini akasiyana andakaita zvinobudirira kubva pandakasvika.
Ndakamisa vanopa masevhisi matsva izvo zvakaita kuti kambani ideredze zvakanyanya mutengo wezvikamu zvedu.
Ndakaongorora zvese zvakapihwa kubva kune vekare vatengesi uye isu takagadziridza maitiro edu navo.
Ndakatauriranawo nezvemazuva ekugadzirisa kuti ndikwanise kupindura nekukurumidza kune zvinodiwa nevatengi vedu.
Pakupedzisira, ndakadzidza kudyiwa kwechimwe nechimwe chezvinhu uye ndakaronga kuzadzazve otomatiki kuitira kuti dhipatimendi rekugadzira risambopera.
Sezvamunoziva, ndagara ndichidzivirira zvido zvekambani uye ndicharamba ndichidaro, nokuti ndiwo maonero andinoita basa rangu.
Ichi ndicho chikonzero ndinotora rusununguko rwekukumbira kuti mundipe nemutsa nguva yekusangana, panguva yenyu, kuti tikurukure.
Muhoro wekuwedzera chikumbiro: mutengesi mubatsiri
Mushandi wekambani kubva XXXXXX, ini parizvino ndine chinzvimbo cheMutengesi Mubatsiri.
Hunyanzvi hwangu, kupindura kwangu uye mari yangu zvakagara zvichizivikanwa. Muna 2021, mibairo yakawanikwa uye mishoni yandaive nebasa nayo yakagonesa kambani kuvandudza zvakanyanya sevhisi yayo kune vatengi. Ndinozvibvumira, panyaya iyi, kuti nditaure mimwe mienzaniso chaiyo:
Iyo kambani yakamisa, nekubatana kwangu, software nyowani yekupinda uye yekutevera maodha evatengi. Saka ini ndinobata nezviitiko zvakawanda pazuva: XXXXXX pachinzvimbo cheXXXXXX kare.
Ndakagadzirawo misangano yevhiki nevhiki nemumwe wangu kubva muchitoro, izvo zvinondipa mukana wekutora faira yega yega. Ini saka ndinocherekedza kutaurirana kuri nani pakati pemadhipatimendi edu, izvo zvinonditendera kuti ndipindure zvakanyanya kune vatengi vedu sezvo ini ndichigona kuvapa mhinduro yekukurumidza.
Pakupedzisira, ndakatora zvidzidzo zveChirungu gore rose kuburikidza neCPF, nevhidhiyo, manheru kumba. Ichokwadi kuti kudzidziswa kwemunhu, asi hunyanzvi uhu huri pamusoro pezvese hunoiswa kubatsira kambani sezvo ini ndinozvishandisa mazuva ese mukuita mabasa angu.
Ini nokudaro ndinozvibvumira kukumbira kuwedzerwa muhoro wegore ra2022, izvo zvingave kurudziro chaiyo kwandiri.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: kugara uchitengesa
Mushandi wekambani kubva XXXXXX, ini parizvino ndine chinzvimbo chekugara kushambadzira
Kubva zuva iroro, ndakavandudza hunyanzvi hwangu kubva pandakawana ruzivo rwese rwehunyanzvi runodiwa kupindura mibvunzo yevatengi uye kutora makotesheni. Ndakatevera akawanda makosi ekudzidzisa uye handizezi kubvunza dhipatimendi rekugadzira kuti rinzwisise kuti chikamu chinoshanda sei uye maitiro ayo ekugadzira.
Kubva zvino zvichienda mberi, ndiri kuita zvakawanda uye nhamba yefungidziro yandinogadza hairegi kukura. Chokwadi, muna 2021, ndakaita xx makotesheni muna 2020, iyo nhamba yaive xx.
Pakupedzisira, sezvamunoziva, ndakaiswa mari yakakwana mubasa rangu uye ndinogara ndiripo. Vanhu vanotengesa vandinoshanda navo vanozosimbisa kuti ndinogara ndiri pabasa revatengi vavo.
Naizvozvo zvinoratidzika kwandiri kuti ndakavandudza zvakanyanya kunaka kwehukama netarisiro uye nevatengi vedu venguva dzose.
Kunyoreswa kwevanokwanisa kugadzwa kwakagadzirwawo. Izvi zvaita kuti mubairo uwedzere ne xx% gore rino.
ndinoramba ndiri mumaoko enyu.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: accountant 1
Kutevera kubvunzurudza kwedu kwexxxxxx, ndinozvibvumira kunyora zvinyorwa zvakasimudzwa zvine chekuita nemuhoro wangu wegore ra2022.
Chekutanga, ndinoda kukuyeuchidzai kuti ndanga ndichishanda seakaunzi kubva xxxxxx mukati meKambani YY uye kuti ndinoda basa rangu.
Isu takaongorora pamwe chete mamishini akaitwa muna 2021 uye iwe wakasimbisa kuti wakatenda mari yangu uye pamusoro pese kubudirira kwechimwe nechimwe.
Saka, ndakagadzira pepa remari mwedzi wega wega iro rakakubatsira kuita sarudzo uye kutonga kambani sezvaunokwanisa.
Ini ndakamisikidza kunyanya kutarisisa kwekubhadharwa kwevatengi uye nekuda kweizvi, miripo yakabhadharwa yakaderedzwa zvakanyanya. Muna 2020, takanga tine huwandu hwe……….uye kunonoka kwe…….. mazuva apo muna 2021 mari yacho……….uye huwandu hwemazuva hwave………..
Naizvozvo ndinozvibvumira kudzokorora chikumbiro changu chekuwedzera muhoro wegore ra2022, izvo zvingave kurudziro chaiyo kwandiri.
Zviripachena kuti ndinewe kana uchida kutaura nezvazvo zvakare.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: accountant 2
Kubva xxxxxx mukati meKambani, ini ndinoshandisa basa reakaundendi uye ndiri kutonga zvakanyanya zvesocial.
Aya makore maviri apfuura 2 uye 2020 anga akanyanya kundiomera. Denda risati ramboitika uye nemamiriro akaomarara ataifanira kugadzirisa akandimanikidza kuti ndijaire nyaya dzakasiyana. Pasina kudzidziswa, zvaive zvakakodzera kugadzira zvikamu zvitsva mumapayslips. Ndaitarisirawo kubhadharwa kwevasina basa uye ukama hwose nevakuru vakuru. Paaudit yake, accountant akasimbisawo kuti pakanga pasina kukanganisa.
Chiitiko ichi chave chichipfumisa zvikuru kwandiri uye ndinoratidzika kunge ndakatora dambudziko racho zvakanyanya. Ndakadyara mari yakawanda kuti sevhisi ishande zvakajairwa uye kuti vandinoshanda navo vasatambure, pamusoro pekukuvadzwa kwakakonzerwa nedenda iri, mamwe matambudziko.
Naizvozvo zvingave zvine mubairo mukuru kuti ndikwanise kuwana wedzero yemuhoro wangu.
Zviripachena kuti ndinewe kana uchida kutaura nezvazvo panguva yekusangana.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: yokuvaka
Mushandi wekambani kubva XXXXXX, ini parizvino ndine chinzvimbo chekuvandudza.
Kubva zuva iroro, ndakaenderera mberi nekufambisa kuvandudzwa kwezvikumbiro zvakasiyana-siyana zvekambani.
Sezvaunoziva, ndakatungamira mapurojekiti akati wandei akakonzera kutengesa.
Ini zvakare ndiri mutsigiri wevatengi wekushandisa webhusaiti yedu nyowani uye zvese zviri kufamba zvakanaka.
Chekupedzisira, parizvino ndiri kugadzira application inozosandura nzira yedu yekushanda uye pamusoro pezvose kuchengetedza nguva yakakosha kune vese vashandi vekambani.
Ini ndiri kugadzira zvakanyanya, ndinogara ndichishandisa mhinduro dzakakodzera kuti ndiwane yakavimbika uye intuitive komputa system. Ndine mari yakakwana mubasa rangu uye ndinogara ndiripo.
Saka zvinoratidzika kwandiri kuti ndakavandudza zvakanyanya kunaka kwebasa remunhu wese. Ini ndinogara ndichitsvaga kuti matekinoroji matsva anoshanduka sei, ndinotarisawo kuti mawebhusaiti evanokwikwidza edu akamisikidzwa sei.
Kumbira kuwedzerwa muhoro: pkwese kwese 1
Mushandi wekambani yako kwemakore xx, ini parizvino ndine chinzvimbo che.
Kwemwedzi mishomanana iye zvino, ndaona kuti munondipa mamwe mabasa akawanda ekuita uye mamwe mabasa akawanda. Ndiri kufara uye kufara kutora chikamu mukusimudzira kambani.
Sezvauchange waona pasina mubvunzo, handiverenge maawa angu, ndinorevesa, ndinogara ndichiita basa rangu nenguva uye hunyanzvi hwangu hwakashanduka.
Ndosaka ndichida kubatsirwa nekuwedzerwa muhoro wegore ra2022. Muhoro wangu unobva waenderana nemabasa angu.
Kambani nechinzvimbo chandinobata zvizere zvinozadzisa zvandinotarisira. Ndinonzwa kugutsikana uye ndinokoshesa kukosha kwevandinoshanda navo. Isu tinogara tichitsigirana uye tine chinangwa chimwe chete: kugutsikana kwevatengi vedu.
Ndokusaka ndichida kuva nenguva yekukurukura nezvechikumbiro changu pamwe chete.
Ini ndinoramba ndiri paruoko rwako rwese nezve zuva uye nguva yebvunzurudzo iyi.
Kumbira kuwedzerwa muhoro: pkwese kwese 2
Mushandi wekambani kubva XXXXXX, ini parizvino ndakabata chinzvimbo chexxxxx uye takaita hurukuro pa xxxxxx.
Mubvunzurudzo iyi, wakataura akati wandei mapoinzi ekuvandudza:
Mazhinji kukanganisa zviperengo mumameseji angu
Saka ndakatora pfungwa idzi mbiri dzinoita sedzakakosha kwandiri. Ndakakwanisa kuvandudza unyanzvi hwangu. Chokwadi, nebetsero yeCPF, ndakatevera rovedzo yechiFrench uye zvikurukuru mukuperetera negirama. Mumaawa ose XX ezvidzidzo. Maawa aya ekudzidza akandibvumidza kunyatso kuvandudza kunyorwa kwemameseji angu. Makandiratidza izvi, izvo ndakatenda zvikuru.
Nezvekupindura kwangu, ndakafunga kushandisa, sezvamakurudzira, Outlook kunyoresa uye kurongedza mabasa ese andinofanira kuita mukati mezuva. Nekudaro, ini handikanganwi zvakare uye ndinove nechokwadi chekuti zvese zvinopedzwa uye nenguva. Ini pachangu, ndinowana neiyi nzira nyowani imwe nyaradzo yebasa uye pamusoro pezvose, ini ndiri kunyanya kugadzikana.
Ndinovimba unokoshesa shanduko iyi kuedza uye dhiraivha yangu yekuvandudza.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: gweta
Nyanzvi mune zvemutemo, ini ndiri mutauriri wako uye ane rombo rakanaka chipangamazano pamatambudziko ese emutemo eKambani.
Kunyanya, ini ndinochengetedza kuchengetedza zvido zvako zvine chekuita nemidziyo yeindasitiri, pamwe nezvese zvikumbiro zvepatent uye kudzivirira kwavo.
Ini ndinoita wachi yemakwikwi uye handizeze kupindira kana paine fungidziro yemakopi ematendi ako. Ndinochengetedza zvido zvekambani mazuva ese.
Gore rino, ndakanyanya kutevera faira yeYY iyo yakaita kuti tive nehanya zvikuru, zvakatora nguva yakareba kuti tigadzirise nerubatsiro rwemagweta, zvaive zvakaoma. Asi, ndakashanda zvakanyanya, ndakatsvaga ndikawana kukanganisa kwemhandu dzedu. Uye takabuda takunda!
Iniwo ndinoongorora zvibvumirano zvese, njodzi dzinogona kuitika, ndinotarisa kushanduka kwemutemo. Ini ndinowanikwa kune ese madhipatimendi ekambani kupindura mibvunzo yese uye kutarisa kuti zvese zviri mugwara.
Wava kuziva kuremerwa kwangu, kuwanikwa kwangu uye kunaka kwebasa rangu.
Ndosaka ndichizvibvumira kukukumbira kuti uwedzere muhoro wangu wegore ra2022.
Ini ndinoramba ndiri paruoko rwako rwese kutaura nezvazvo paunoda.
Kumbira kuwedzera muhoro: muchengeti wechitoro
PAKAVHA: Mubairo wangu muna 2022
Mushandi wekambani kubva XXXXXX, ini parizvino ndine chigaro chemuchengeti wechitoro, maneja wedura.
Nyanzvi yechokwadi musangano uye kugadzirira kwemirairo, iwe wakandipa, muna 2021, mamwe mabasa mazhinji
Takahaya mubatsiri mutsva. Naizvozvo ndinofanira kuronga odha dzake kuti dzigadzirirwe, kunzvera basa rake nguva nenguva uye kumubetsera pazvinenge zvakakodzera.
Ini ndinotarisira kuchengetedza kwezvikepe zvekusimudza
Ini ndinoisa maodha evatengi muERP
Ini ndinoisawo maodha evanogovera
Iniwo ndinofara chose neruvimbo rwamakaisa mandiri uye ndiri kuita zvizere mabasa angu matsva. Ndinogona kutotaura kuti ndakazadzikiswa mubasa rangu.
Sezvawaona, takaita zero zvikanganiso mumaodha evatengi gore rino. Pamusoro pezvo, ini ndakamisa kudyidzana nevatakuri uye ikoko zvakare, isu hatina dambudziko kunze kwekunonoka kutakura katatu muna 3.
Iniwo ndinowanzo sangana nevatengi pakutumira zvinhu uye zvese zviri kufamba zvakanaka.
Muhoro wekuwedzera chikumbiro: kushambadzira
Tichangobva kuve nebvunzurudzo yangu yepagore pa xxxxxx panguva yatakakurukura nezvemuripo wangu wa2022 uye nekuwedzera kunobvira.
Ini ndaida kusimbisa chikumbiro changu nekukupa chaiyo mienzaniso yemabasa akabudirira:
Iyo kambani ikozvino yakawanda iripo pasocial network. Mazuva ese, ndinotumira foto ine mavara anokwezva maziso. Nokuda kweizvi, ndiri kutarisana nevamiririri vekutengesa kubva kwavari ini ndinounganidza ruzivo pamusoro pevatengi uye mirairo yatakawana pamwe chete nenzvimbo dzatakatora.
Isu ikozvino tinotumira Newsletter mazuva gumi nemashanu ega ega kune vatengi vedu. Ndinonyora zvachose uye ndinotarisira kugovera.
Pakupedzisira, wakaona kubatanidzwa kwangu mukambani. Ndini tsime remazano matsva uye ekutanga. Ini ndinobvuma chose kutsoropodza kwandinoteedzera zvine hungwaru nezvipokana. Ndinogara ndichitsvaga mhinduro.
Naizvozvo ndinozvibvumira kukubvunzai zvakare kuti muhoro wekuwedzera wegore ra 2022. Uku kungave kucherechedzwa chaiko kwekukosha kwebasa rangu.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: munyori wezvekurapa
Mushandi wefemu yako kubva XXXXXX, ndinozvibvumira kukukumbira nguva yekusangana kuti tikurukure pamwe chete muhoro wangu muna 2022.
Chekutanga, ndinoda kukutendai neruvimbo rwamunoisa mandiri.
Hunyanzvi hwangu, kupindura kwangu uye mari yangu zvakagara zvichizivikanwa. Gore rino, ndakatora matanho akati wandei ayo ndine chokwadi chekuti zvakakonzera kuvandudzwa kwakanyanya mukushanda kwekambani.
Nzvimbo yacho inochengetedzwa zvakakwana uye inoiswa disinfected nguva dzose. Ndakaisa, sezvawandibvunza, mukadzi wekuchenesa anouya ka2 kusvika katatu pazuva. Iyo saka kuchengetedzwa kwevarwere, asiwo kwatiri.
Kugadzwa kunoitwa zvinoenderana nezvido zvako uye chirongwa chako. Isu tinoshanda mune yakanaka timu mweya uye isu tine hunhu hwakafanana: kupa hutano hwehutano kune varwere vako.
Maminitsi ekutaurirana anokurumidza kutaipa mushure mekushanya kwega kwega uye anotumirwa kune vaunoshanda navo kana zvichidikanwa. Handina kunonoka.
Chekupedzisira, ndinogara ndiripo uye handiverenge maawa angu kana varwere vako vachindida.
Ndokusaka ndichida kuti timbotora nguva pamwe chete kuti tikurukure nezvenyaya iyi munguva yemberi yamuchandipa nemutsa.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro: technician
Isu munguva pfupi yapfuura takasangana kubvunzurudzo yangu yega, iyo xxxxxx. Panguva yenhaurirano iyi, ndakakumbira kuwedzerwa pamuhoro wangu wegore ra2022. Ndaida kunyora pasi pfungwa dzese dzatataura kuti ndikuratidzei zviito zvese zvandakaita:
Ini kazhinji kazhinji ndinoperekedza vatengesi kune vatengi kuti vape rubatsiro rwehunyanzvi
Ini ndinobatsira kugadzira kusati kwatangwa zvikamu zvitsva uye kutarisa kuti zvese zviri kuenderana nehurongwa
Ini ndinopindura nefoni uye email kune vatengi vane mibvunzo yehunyanzvi yekubvunza
Ndinotarisa quote yese
Ini ndinoronga zvirongwa zvekusimbisa
Saka ini ndinofunga kuti hunyanzvi uhu hwese hwakawedzerwa kukosha kukambani.
Ndakanyanya kuzvimiririra. Mhinduro dzangu dzinogara dzakavimbika uye dzichikurumidza.
Ini ndinoramba ndiripo kwamuri pese kana muchida kukurukura nezvemubhadharo wangu zvakare.
Ndinokutendai pachine nguva mberi nekunzwisisa kwenyu uye nekurudziro yandakagamuchira kubva kwamuri panguva yebvunzurudzo yangu yegore negore.
Kumbira kuwedzera muhoro: teleprospector
Mushandi wekambani kubva XXXXXX, ini parizvino ndine chinzvimbo chetelemarketer.
Kubva zuva iro, ndakawana chiitiko chakasimba chinondibvumira kudarika zvakanyanya zvinangwa zvakaiswa.
Chokwadi, zvinoenderana nenhamba, ini ndiri mumwe weakanakisa telemarketers:
Ini ndinokwanisa kuita xxx mafoni pazuva
Ndinowana maxx dates
Ndinokwanisa kupedzisa mirairo yakawanda
Mishumo yangu yevatengesi yakajeka uye inosanganisira ruzivo rwese rwavanoda pakushanya kwavo.
Kuenzaniswa ne2020, ini ndinoshanda zvakanyanya, nekuti ndinoziva zvigadzirwa zvangu zvirinani uye ndinonzwa kugadzikana nematarisiro. Ini zvino ndava kugona kuita kwavo, saka ndinofungidzira mhinduro dzavo uye ndagadzirira nharo kuti ndipfuure mafirita ekutanga.
Iri ibasa rakaoma zvakanyanya, nekuti vatinopindirana navo havana nguva yekutaura nesu uye ini ndinogara ndichitsvaga kamutsara kadiki, izwi diki kana matauriro anozotungamira pakusangana.
Ndosaka ndichizvibvumira kukumbira kubvunzurudzwa nemi kuti tikurukure nezvemuhoro wangu wegore ra2022. Ndinoda chaizvo kukurudzirwa uye kurudziro kubva kwamuri kuti ndirambe ndichishanda nesimba uye kuwedzera mari yekambani.
Chikumbiro chekuwedzera muhoro neemail June 27th, 2022Tranquillus
pashureMari inopihwa yezororo isina kutorwa nekuda kwedambudziko rehutano inowedzerwa
zvinoteveraVashandi vari pazororo rekufamba vanogona kubatsirwa kubva kuCollective Transitions scheme
Kuwanikwa kweCordial Pro Orthographic Retouching Software.
Kunyora mushe, hunyanzvi hunokosha!